JWT Mitemo Yekushandira - Xiamen Jin Weitai Rubber & Plastic Co, Ltd.
Mitemo Yekushandira yeJWT
Nekuwana iyo webhusaiti pa https://www.jwtrubber.com, urikubvuma kusungwa nemitemo iyi yebasa, mitemo yese nemirau, uye unobvuma kuti ndiwe une basa rekuteerera chero mitemo inoshanda yemuno. Kana iwe usingabvumirane nechero yeaya mazwi, unorambidzwa kushandisa kana kuwana saiti ino. Zvishandiso zviri mune ino webhusaiti zvinodzivirirwa nemutemo unoshanda wekopiraiti uye chiratidzo.
a.Mvumo inopihwa kurodha pasi kwenguva imwe kopi yezvinhu (ruzivo kana software) pawebsite yeJWT yega yega, isiri yekutengesa kwekutarisa kwekutarisa chete. Uku ndiko kupihwa rezinesi, kwete kuendesa zita, uye pasi peiri rezinesi haugone:
i. gadzirisa kana kuteedzera izvo zvigadzirwa;
ii. shandisa izvo zvinoshandiswa kune chero chinangwa chekushambadzira, kana kune chero ruzhinji kuratidzwa (kushambadzira kana kusiri kushambadzira);
iii. kuyedza kuumbiridza kana kudzoreredza mainjiniya chero software irimo pawebhusaiti yeJWT;
iv. bvisa chero copyright kana zvimwe zvivakwa zvekupokana kubva muzvinhu;
v. chinjana izvo zvinhu kune mumwe munhu kana "girazi" izvo zvinhu pane chero imwe server.
b. Iri rezinesi rinobva ramisa wega kana ukatyora chero yeiyi marambidzo uye inogona kumiswa neJWT chero nguva. Paunomisa kuona kwako zvinhu izvi kana kugumisirwa rezinesi iri, unofanirwa kuparadza chero zvinhu zvakabuditswa zvaunazvo mungave mumagetsi kana akadhindwa fomati.
a.Izvo zvinhu zviri pawebhusaiti yeJWT zvinopihwa pane 'sezvazviri' hwaro. JWT haigadziri warandi, inoratidzwa kana kurehwa, uye nekudaro inoramba uye inoregedza zvimwe zvese zvivimbiso zvinosanganisira, pasina muganho, zvinoreva garandi kana mamiriro ekutengesa, kugwinya kwechimwe chinangwa, kana kusaputsa midziyo yehungwaru kana kumwe kutyorwa kwekodzero.
b. Kupfuurirazve, JWT haitenderi kana kuita chero chinomiririra maererano nekururama, zvingangoitika mhedzisiro, kana kuvimbika kwekushandisa kwezvinhu zviri pawebhusaiti yazvo kana zvimwe zvine chekuita nezvinhu zvakadaro kana pane chero nzvimbo dzakabatana nenzvimbo ino.
Hapana chiitiko JWT kana vanopa vayo vanova nemhosva kune chero kukuvara (kusanganisira, pasina muganho, kukuvara kwekurasikirwa kwedata kana purofiti, kana nekuda kwekukanganisa bhizinesi) kunobva mukushandisa kana kutadza kushandisa izvo zvinhu zviri pawebhusaiti yeJWT, kunyangwe JWT kana mumiririri ane mvumo weJWT akaziviswa nemuromo kana mukunyora nezve mukana wekukuvara kwakadai. Nekuti mamwe masimba haatenderi kutapudzwa pamawaranti anotaurwa, kana kusakwana kwemutoro wekukuvara kwakakomba kana kwakangoitika, izvi zvisingakwanisike kwauri.
Izvo zvinhu zvinowoneka pawebsite yeJWT zvinogona kusanganisira technical, typographical, kana mifananidzo yekukanganisa. JWT haitenderi kuti chero zvigadzirwa zviri pawebhusaiti yacho zviri chaizvo, zvakakwana kana zvazvino. JWT inogona kuita shanduko kune izvo zvinhu zviri pawebhusaiti yayo chero nguva pasina ziviso. Nekudaro JWT haiite chero kuzvipira kugadzirisa zvinhu.
JWT haina kuongorora ese masayiti akabatanidzwa kune yayo webhusaiti uye haina mhosva yezviri mukati mechero rakabatana nzvimbo. Iko kuiswa kwechero chinongedzo hazvireve kubvumidzwa neJWT yenzvimbo. Kushandiswa kwechero yakadai webhusaiti webhusaiti kuri panjodzi yemushandisi.
JWT inogona kudzokorora aya mazwi ebasa kune webhusaiti yayo chero nguva pasina ziviso. Nekushandisa ino webhusaiti urikubvuma kusungwa neiyo yazvino vhezheni yeiyi mazwi ebasa.
Aya mazwi nemamiriro ezvinhu anotongwa uye akaumbwa zvinoenderana nemitemo yeChina uye iwe unoendesa zvinesimba kumatunhu akasarudzika ematare muHurumende kana nzvimbo iyoyo.
Passive Bass Radieta, Radiator Rubber Isolators, Passive Radieta, Radiator Rubber Gomo, Bass Radiator, Diki Aluminium Led Radieta,